IINGCAMANGO ZEGARAJI LOMNYANGO (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - IIGARAJI
Eyona Iigaraji Iingcamango zeGaraji lomnyango (Isikhokelo sokugqibela)
Wamkelekile kwimibono yethu yomnyango wegaraji isikhokelo sokugqibela kubandakanya ezona ntlobo zidumileyo, amanqaku kunye nezinto eziluncedo kunye nezibi.
Umnyango wegaraji unokuliphucula kakhulu ixabiso lobuhle lekhaya lakho ngeendlela ezininzi. Iqulethe isinye kwisithathu se-facade yekhaya lakho, ke kufuneka ikhethwe kakuhle ukuxhasa ukujongeka kwendlu yakho. Kwaye ekubeni yenye yezona zinto zibonakalayo ngaphandle kwekhaya lakho, umnyango wegaraji okhethwe kakubi unokudala umbono ombi. Njengalo naliphi na icandelo lekhaya lakho, ukuthatha isigqibo kuyilo, uhlobo, izinto kunye nesitayile somnyango wegaraji kufuna ukucinga ngononophelo.
Apha ngezantsi siqokelele esethu isikhokelo sokugqibela kwiingcango zegaraji ukukunceda uthathe isigqibo sokuba leliphi elifanele ikhaya lakho.
Izitayile zoMnyango weGaraji
Iminyango yeGaraji ePhakamileyo
Uhlobo lweeGaraji zeGaraji
Iminyango yeGaraji yangoku
Iminyango yeGaraji yanamhlanje
Uyilo loMnyango weGaraji
Amacango eGaraji aMacala aMacala aBucala kunye neeSango zeGaraji ezijikelezayo
Amacango eGaraji eCandelo
Ukujikeleza iiGaraji zeGaraji
Isilayidi esiya kwiiGaraji ezisecaleni zeGaraji
I-Tilt-Up / Up kunye ne-Canopy Doors Garage
Abangatshatanga kunye neeDango ezimbini zeGaraji
Umnyango weGaraji elilodwa leGay Bay
Umnyango weGaraji ezimbini
Izinto zeMinyango yeGaraji
Iminyango yeGaraji yeGumbi
Iminyango yeGaraji yentsimbi
Iminyango yeGaraji edibeneyo
Iminyango yeGaraji yeGlasi yeGlasi
Iglasi yeGango eliCwangcisiweyo
Iminyango yeGaraji yeVinyl
Iminyango yeGaraji yepeyinti
Ipeyinti yoMnyango weGaraji elungileyo
Igaraji yoMnyango weWindows
Iindidi zeGaraji yoMnyango weWindows
Iingcango zeGaraji ezifakiweyo
Abavula iiGaraji zeGaraji
Ubungakanani beMinyango yeGaraji
Imilinganiselo yeGaraji esemgangathweni
Ubungakanani boMnyango weGaraji eliqhelekileyo
Iminyango yeGaraji yeRV
Amaxabiso oMnyango weGaraji
Amaxabiso eGaraji eGaraji ngokusekwe kubukhulu
Amaxabiso eGaraji eGaraji ngokusekwe kwizixhobo
Iindleko Zokufakwa Komnyango Wegaraji
Amaxabiso eSango seGaraji Ngokubanzi (Izixhobo, iihardware kunye nokufakwa kufakiwe)
Luluphi olona hlobo luGqibeleleyo loMnyango weGaraji?
Ngaba iiGaraji zeGaraji zingapeyintwa?
Inkampani ephezulu yeGaraji yokuSebenzisa
Ukuthenga iiGaraji zeGaraji kwiiZiko loPhuculo lwaseKhaya
Iinkampani zoMnyango weGaraji eziPhezulu
Kukho iintlobo ngeentlobo zezitayile zomnyango wegaraji abanokuthi abaninikhaya bakhethe kuzo. Nokuba ikhaya lakho lilisiko, li-rustic, langoku okanye langoku, kukho isitayile esithile kunye noyilo lomnyango wegaraji onokulingana ne-facade yayo. Nje ukuba unoluvo lohlobo olulungele ikhaya lakho, ungasebenzisa enye Isoftware yoyilo lwegaraji iinkqubo ukuyila nokubonwa.Nalu ushwankathelo lweendlela ezithandwayo zomnyango wegaraji:
Olona hlobo luqhelekileyo lomnyango wegaraji yiphaneli ephakanyisiweyo. Sele iyindlela esemgangathweni kunye noyilo lweengcango zegaraji ezikhoyo kwimarike. Ekuqaleni, iphaneli ephakanyisiweyo yeengcango zegaraji zibonisa iipaneli ezidadayo ezifakwe kuloliwe kunye nesakhelo sesitayile. Kuyo yonke le minyaka, bekukho utshintsho oluncinci kwizinto zayo nakwimbonakalo yokuhlaziya uyilo lwayo. Iinguqulelo zale mihla ezingaphezulu zeengcango zegaraji eziphakanyisiweyo zenziwe ngeglasi ye-fiberglass eyomeleleyo kwaye ebunjiweyo ukuze ifane nomgaqo kaloliwe odibeneyo kunye nomnyango wepaneli ophakanyisiweyo.
Nangona i-fiberglass ihlala isetyenziselwa iinguqulelo ezintsha zomnyango wepaneli ophakanyisiweyo, ungathenga olu hlobo lomnyango wegaraji kuzo zonke iintlobo zezinto ezinje ngomthi, intsimbi okanye ialuminium.
Iminyango yegaraji yesitayile esivela kwigama labo kuyilo lweengcango ezifunyenweyokwizindlu zeenqwelo ezindala. Umnyango wokuqala wesitayile sokuhamba wawukho nangaphambi kokuba iimoto zenziwe kwaye iinqwelo zamahashe zazisetyenziswa njengeyona ndlela iphambili yokuhamba. Iinqwelwana zazigcinwe koovimba kwaye ukuze zilingane, iingcango ezisetyenzisiweyo zazibanzi kwaye zijinga ngokwaneleyo. Esi yayisisikhuthazo sendlela yokuhamba kweengcango zegaraji- iingcango ezinkulu ezibanzi ezijikela ngaphandle.
Uyilo lwantlandlolo lweengcango zesitayile senqwelomoya zisebenzisa iinkuni eziqinileyo ezinomthi ontsonkothileyo kwi-facade njengesihombiso. Uyilo oluqhelekileyo lubandakanya ukufakwa kweefestile zokuhombisa, isitayile sendawo yokugcina iiplanga. Izixhobo zexesha elifanelekileyo njengeehenjisi zentsimbi kunye neziphatho ezinkulu zigqiba ukubonakala kolu luyilo lomnyango.
Iingcango zesitayile senqwelomoya zixhonywe emacaleni kwaye zijike ngaphandle ukuze zivuleke ngokwaneleyo. Iingcango zegaraji zesitayile senqwelomoya nazo zitshintshile zivela embindini, kodwa kuye kwakho uhlaziyo kunye neemodeli ezintsha ngoku ezinokuvula okuzenzekelayo okuvulekileyo. Iingcango zale mihla zokuhamba kwenqwelomoya zidibanisa umtsalane wehlabathi elidala lokungena kweengcango zegaraji nokusebenza kakuhle kwetekhnoloji yale mihla.
Nangona iingcango zegaraji zesitayile senqwelomoya zinenkangeleko yemveli, zizinto ezikhethwayo kwizintlobo ezahlukeneyo zendlu, ukusukela kwiklasikhi ukuya kuthi ga ngoku. Inkangeleko eyomeleleyo kodwa ebukekayo yokuba uyilo lomnyango wegaraji yinto abaninimzi abatsaleleka kuyo. Ukongeza, isibheno sayo esingapheliyo sijongeka ngokuqinisekileyo esiya kuhlala iminyaka.
Uyilo lwangoku lwasekhaya konke malunga nokwenza imbonakalo engenamthungo usebenzisa iifom ezicocekileyo, imigca eyomeleleyo, ukufana kunye nezinto ezixubileyo. Ukwenza i-facade encinci, kubalulekile ukusebenzisa uyilo lomnyango wegaraji elinokuthi lidibane ngaphandle komzi, kwaye kulapho kusetyenziswa khona iingcango zegaraji zangoku.
Olona hlobo luqhelekileyo lomnyango wegaraji olusetyenziselwa amakhaya anamhlanje Iingcango zendlela yesilayidi. Olu hlobo lwesimbo somnyango wegaraji luvulwa ngaloukusonga njengepaneli enye, ngokuchaseneyo nolunye uyilo oluvulekileyo lube ziipaneli ezintathu ezithe tyaba okanye ezine ezahlukileyo ezigoba kwiihenjisi njengoko umnyango uphakama. Iingcango zesitayile seSlab zisebenzisa ii-openers ezizenzekelayo.
Xa kuziwa kwizinto zokwakha, akukho mda weengcango zegaraji zangoku kwaye ziqala ngokhuni, ngentsimbi, ngealuminiyam, ngokudityaniswa, ngeglasi yeglasi nakwiglasi- kuxhomekeke kuphela kwinto ebonakalayo ehambelana ne-facade yendlu.
Uyilo lweengcango zegaraji zangoku zilula kakhulu kunalezo zesintu. Imigca ibalasele ngakumbi, ihlala ithe nkqo, akukho mhlobiso kodwa inokubandakanya iiphaneli zeglasi ezixande okanye ezikwisikwere ngaphezulu okanye emacaleni omnyango. Ngamanye amaxesha, lonke ucango lwegaraji lunokuza ngeepaneli zeglasi.
Iingcango zegaraji zale mihla ziyafana kakhulu neengcango zegaraji zesitayile sangoku. Uyilo lwabo bobabini lucekeceke, luyamangalisa, alunamthungo kwaye lubonisa imigca eyomeleleyo, ebukhali kunye neefom ezicocekileyo.
Uyilo oluqhelekileyo lweengcango zegaraji zale mihla zihlala zibonisa iiphaneli zeglasi ezinobushushu ezivalwe kwisakhelo esomeleleyo, esinokumelana ne-aluminium. Iingcango zegaraji ezingenasiphelo nazo ziyabethwa kumakhaya anamhlanje njengoko zinokubonakala ngaphandle komthungo kwaye zicocekile.
Kukho iindidi zeepaneli zeglasi ezigqityiweyo ezisetyenziselwa iingcango zegaraji zale mihla. Ngaphandle kokugqitywa okucacileyo okuqhelekileyo, abaninimzi banokukhetha kwiglasi enqabileyo okanye eglasiweyo. Iglasi ebonisiweyo egreyini okanye ebhedini emnyama, i-opaque emhlophe okanye i-opaque yeglasi emnyama kunye neglasi emnyama eguqukayo zezinye izinto ezigqityiweyo zeglasi ezinikezelwa ngabavelisi beengcango zegaraji zangoku.
Izakhelo zeAluminiyam, kwelinye icala, ziyafumaneka kumgubo wengubo emhlophe, emnyama okanye ubhedu okanye ugqityiwe nge-bronze okanye mnyama. Ukuba imibala engathathi hlangothi ayihambelani ne-facade yekhaya lakho, ukutyabeka umgubo ngeefreyim zealuminium zangoku iingcango zegaraji imibala iza malunga ne-200 eyahlukileyo
Iingcango zegaraji zala maxesha zithathwa njengeemodeli zobuchwephesha obuphezulu nazo, kuba zihlala zibandakanya izinto ezikrelekrele kunye nezinto ezikhethekileyo.Iipaneli ezithile zeglasi ziza nezinto eziphambili zokucoca ukukhanya ezimodareyitha ubungakanani bokukhanya kwe-UV okungena ekhayeni lakho. Enye into eyaziwayo esetyenziselwa iingcango zegaraji zale mihla iglasi esezantsi ye-E okanye iglasi ye-Emissivity ephantsi eluhlobo lweglasi enesambatho esikhethekileyo esenziwe ngesinyithi esinceda ukubonisa ubushushu ngokulinganayo ehlotyeni nasebusika.
Ngoku siza kugubungela iintlobo zeengcango zegaraji ngokubhekisele kwindlela ezivula ngayo.Ngaphandle kobukhulu obahlukeneyo, izitayile kunye neendlela, iingcango zegaraji zinokuhlelwa ngokwendlela ezivula ngayo. Banokujinga ngaphandle, batyibilike ecaleni, bavule phezulu okanye basonge phezulu. Ukongeza, banokuza kwiiphaneli ezizodwa, iiphaneli eziphindwe kabini okanye zahlulwe zangamacandelo.
Nazi iindidi ezaziwa kakhulu zoyilo lomnyango wegaraji:
Icala legaraji elixhonyiweyo lifana kakhulu nomnyango oqhelekileyo endlwini. Uyilo lomnyango wegaraji lusebenza ngokujija uvule kwaye uvale kwisakhelo esixhonyiweyo ngapha nangapha komnyango. Yeyona uyilo ilula kunye nefashoni yakudala ekhoyo kwiingcango zegaraji. Amacango axhonyiweyo asecaleni ayaziwa njengokujika iingcango ngaphandle kuba njengoko kukhankanyiwe, bayaphuma ukuze bavule.
Iingcango zegaraji ezisecaleni zinokufana kakhulu neengcango ezinkulu zokugcina okanye iingcango zesitayile senqwelomoya ezenziwe ngamacango amabini, zixhonywe kwicala elinye kwaye zivula kwiziko. Ezi zihlala zenziwe ngomthi kwaye ziza ngeendlela ezahlukeneyo ezinokubandakanya ukufakwa kweglasi, iipaneli, iigroves, i-slats, i-transoms, njl -njalo nantoni na onokucinga ngayo inokulungiswa. Ngaphandle kwokhuni, kukwakho nohlobo lwentengiso ecaleni kweengcango zegaraji ezenziwe ngentsimbi. Esi sitayile sinenkangeleko yemizi-mveliso ethelekiswa nekhaya kunye nobuhle bobuchwephesha bokhuni obuqinileyo bendabuko.
Amacango axhonyiweyo asecaleni afaneleke kakhulu kwiigaraji ezinendawo encinci yentloko kunye neendawo ezicacileyo zomgangatho. Kuba baphuma ngaphandle, akufuneki kubekho isithintelo phambi komnyango wegaraji okanye kwindlela yokuhamba.
Iingcango zegaraji zecandelo lolona hlobo luqhelekileyo lweengcango zegaraji ezisetyenziswa kumakhaya aseMelika. Njengoko igama layo libonisa, olu hlobo lomnyango wegaraji lwenziwe ngamacandelo amane ukuya kwantlanu edityaniswe kwiihenjisi. Olu hlobo lomnyango wegaraji luvula ngokuthe nkqo kwaye iipaneli zixhomekeke ngaphakathi egaraji njengoko umnyango unyuka ukuze uvuleke. Nje ukuba umnyango wegaraji urhoxiswe ngokupheleleyo, iiphaneli zihlanganisene ngokuthe nkqo ngaphakathi kuphahla lwophahla okanye isilingi.
Iingcango zegaraji zecandelo lukhetho oluphezulu kubanini bamakhaya kuba ngokungafaniyo nomnyango omnye, azidingi ndawo zininzi zokuhamba kwayo njengoko zivula kwaye zivala.
Oku kwenza ukuba iingcango zegaraji zecandelo zikhetheke kakhulu kumakhaya anendlela emfutshane okanye indawo encinci yegaraji. Ikuvumela ukuba wandise indawo yakho yomgangatho kwaye unokumisa imoto yakho kude kube semnyango. Ikwalungele nabanini bamakhaya abaneemoto ezinkulu.
Iingcango zegaraji zecandelo ziza kuluhlu olubanzi loyilo oluhambelana neendlela ezahlukeneyo zokwakha - ukusuka kwezesiko ukuya kwezi zangoku. Ezinye zibandakanya ukufakwa kwefestile kwaye inokwenziwa ngemibala eyahlukeneyo. Ezi zinto zenziwe ngentsimbi kwaye zingena kuzo zombini ezifakelweyo kwaye zingafakwanga zigqunyiwe.
Nangona ixhaphake kakhulu kwizicelo zorhwebo, iingcango ezisongelayo lolunye uyilo lomnyango wegaraji olunikezelwa kwindawo yokuhlala. Isitayile somnyango wegaraji senziwa ngokwamacandelo okanye iislats zensimbi kwii-intshi ezi-2 okanye ubukhulu be-intshi ezintathu. Amacandelo ajikeleza esenza igubu ngaphezulu kovulo lomnyango. Ngenxa yokuba i-compact yayo xa ibuyela umva, olu hlobo loyilo lomnyango wegaraji lufanelekile kumakhaya anomgangatho omiselweyo okanye indawo yophahla.
Akukho frills kwaye kulula ukuyisebenzisa uyilo lweengcango ezisongelayo zezinto ezibenza bakhethwe ngabanini bamakhaya. Ukongeza, le modeli yomnyango wegaraji yakhelwe ukusetyenziswa kakhulu, ke unokulindela ukuba ihlale iminyaka engamashumi. Iingcango ezisongelayo zomsebenzi obanzi zikwahlelwa njengeengcango eziphezulu zegaraji kwaye banokumelana namandla ezinto ezinje ngekhephu okanye ikhephu, ngelixa bengathambekiyo kurusa nokubola.
Ngokubanzi, roll up iingcango zegaraji zibiza kakhulu kuneengcango zegaraji ngenxa yecandelo labo lomsebenzi onzima.
Omnye umnyango wegaraji ophakathi kwesitayile sokuqala kunye nendlela yokuqala yokusebenza sisilayidi kuyilo olusecaleni. Njengoko igama layo lisitsho, isilayidi kumnyango wegaraji esecaleni sisebenza ngokushenxisa okanye ukugoba kwelinye icala legaraji kwaye sihleli ecaleni kodonga. Inokwenziwa ngeephaneli ezihamba ngomkhondo wetroli. Zihlala ziguquguquka ngokwaneleyo ukuba zilandele igophe elincinci okanye ithambeka elincinci kwisilingi okanye phantsi. Olu hlobo loyilo lomnyango wegaraji luzenzekelayo kwaye luza nokwakhiwa kwiimoto ezinokurhoxiswa.
Isilayidi ukuya kwiminyango yegaraji esecaleni zilungele iigaraji ezinophahla olusezantsi okanye igumbi elincinane.
Ngokufana neengcango zegaraji ezixhonyiweyo, ucango oluphezulu lwegaraji alunamacandelo kwaye nazo ziza kwisiqwenga esinye esiqinileyo. Kodwa endaweni yokuxhonywa ecaleni, izixhobo zekhompyutha okanye indlela yokusebenza kolu luyilo lomnyango wegaraji luqhotyoshelwe ngaphezulu okanye kwinxalenye engaphezulu yomnyango. Endaweni yokusebenzisa ihinji yesiqhelo, olu hlobo loyilo lomnyango wegaraji lisebenzisa isixhobo esijikelezayo esivumela umnyango wegaraji ukuba ujike.
Zimbini iintlobo zokutshixa iingcango zegaraji:
Ukucofa umnyango wegaraji: Iingcango zegaraji ezinophahla lolona hlobo luqhelekileyo lokuyilwa kwezinto ezimbini. Tilt up canopy doors garage use of a pivoting hinge mechanism ephakamisa umnyango phezulu. Umnyango emva koko utyibilika umva ngokungqinelana nophahla lwegaraji, ngelixa inxenye encinci yalo idlula ngaphaya kwendlu yendlu.
Xa ucango luvulekile, luhleli ngokungqinelana nophahla kwigaraji yakho. Ngenxa enjalo, akufuneki kubekho sithintelo kuphahla lwegaraji yakho kunye nomnyango wegaraji ngokwawo okanye kwindlela yokuqhuba ukusukela oko umnyango uya kudlulela ngaphambili kwendlu xa uvulekile. Olu hlobo loyilo lomnyango wegaraji lufanelekile kwiigaraji ezinendawo encinci yomgangatho kuba kunokwenzeka ukuba zithathe indawo evela ngaphandle kunangaphakathi.
Umnyango wegaraji etsala kwakhona: Iingcango zegaraji ezirhoxiswayo ezinokutsalwa zifana kakhulu nomlingane wazo, nangona kunjalo kuyilo, akukho nxalenye yomnyango owolulayo okanye ojikelezayo kwibala lekhaya xa livulekile. Olu hlobo loyilo lomnyango wegaraji lufanelekile kwiigaraji ezineendawo ezinkulu zomgangatho okoko zinqunyanyiswe ngokuzimeleyo kwisakhelo
Ngaphandle kwendlela abavula ngayo, iingcango zegaraji zinokuhlelwa ngokobungakanani bazo, ezizezi:iingcango zegaraji ezizodwa nezimbini.
Umnyango omnye we-bay lixesha eliqhelekileyo kwiingcango zegaraji ezenziwe ngepaneli enye enkulu. Olu hlobo lwesayizi yecango legaraji likhulu ngokwaneleyo ukuba linokulungiselela imoto enye. Ubungakanani obuqhelekileyo bomgangatho weengcango zegaraji ezizodwa8 iinyawo ububanzi.
Umzekelo ongentla ubonakalisa igaraji enkulu yeemoto ezimbini kunye neengcango ezimbini ze-bay.
Umnyango wegaraji kabini ligama eliqhelekileyo kwiingcango zegaraji ezenziwe ngeepaneli ezimbini. Eminye imizekelo yeengcango zegaraji eziphindwe kabini zibandakanya iingcango zegaraji ezihamba kunye nokuvala iingcango. Olu hlobo lobukhulu bomnyango wegaraji lukhulu ngokwaneleyo ukuba kudlule iimoto ezimbini. Ubungakanani obuqhelekileyo beminyango egaraji ephindwe kabiniIikubhite ezili-16 ububanzi.
Zininzi izinto ezisetyenziswayo ekwenzeni iingcango zegaraji kwaye nganye nganye yenza umahluko omkhulu kwindlela esebenza ngayo. Ngokukwanjalo, izinto ezisetyenziselwe wena iingcango zegaraji zichaphazela ukusebenza kwayo, ixesha lokuphila, ixabiso lekhaya lakho, ukubonakala kunye nokubhena komgaqo.
Njengawo nawuphi na omnye umnyango ekhaya, iingcango zegaraji zingenziwa ngomthi, intsimbi, iiphaneli zeglasi okanye ezinye iindlela zangoku ezinje nge-vinyl, ii-composites okanye i-fiberglass. Apha ngezantsi sichitha nganye kwezi zikhetho kunye nezinye zeenzuzo kunye nezinto ezingalunganga.
Umthi, ngokubanzi, usajongwa njengezona zinto zixhaphakileyo ezisetyenziswa kulwakhiwo lwangaphakathi nolwangaphandle. Ukuba ufuna umnyango wegaraji onokusebenza ngokungagungqiyo njengendawo ekugxilwe kuyo ngaphandle kwendlu yakho, ke lo mbandela lukhetho olufanelekileyo kuwe njengoko ivelisa ukubukeka kwendabuko, okufudumeleyo nokumema. Olu hlobo lomnyango wegaraji ululungele kakhulu izindlu ezinerustic, ilizwe okanye isitayile sendabuko.
Iingcango zegaraji zomthi ziyafumaneka kwiindidi ezahlukeneyo, eyona nto ixhaphakileyo mahogany, fir, hemlock, meranti, redwood kunye nemisedare. Ezi ntlobo ziyaziwa ngokuziqhelanisa neemeko ezahlukeneyo zokutshintsha ezenza ukuba zihlale amashumi eminyaka. Umsedare uyaziwa ngokunyamezelana nobushushu ngelixa i-redwood inokuphakama ukufuma okuphezulu. Unokuba neengcango zegaraji zokhuni ezenziwe ngokwezifiso kuyo nayiphi na uyilo kunye nobungakanani obuthandayo.
Xa kuziwa kwiindleko, iingcango zegaraji zokhuni zihlala ziwa kwixabiso eliphakathi kuluhlu olubiza kakhulu. Ixabiso lixhomekeke kubukhulu, uyilo kunye nokwakhiwa. Ixabiso eliphakathi iingcango zegaraji ezenziwe ngomthi zihlala zenziwe ngesakhelo esincinci somthi esigcwele ukufakwa kwe-foam kwaye sisongelwe ngeplywood okanye kwi-hardboard, ngelixa oonobumba ababiza kakhulu begaraji begaraji benziwe ngesakhelo esiqinileyo kunye neengcango zepaneli. Ngokwesiqhelo, ucango lwegaraji lomthi oluqhelekileyo lubiza amakhulu amawaka eedola, ngelixa ukhetho lwesiko lunokuya kumawaka eedola.
Izinto eziluncedo ngeengcango zegaraji zokhuni: Uninzi lwabanini bamakhaya luthanda ukukhetha iingcango zegaraji zokhuni ngaphezu kwayo nayiphi na enye into ngenxa yobuhle bayo bendalo obungenakulinganiswa. Inika umtsalane wokwenene kunye nobuhle obuqinisekileyo obungafaniyo nezinye izinto ezinokulinganisa. Ngaphandle kwesi sibonelelo, olunye uncedo lweengcango zegaraji zokhuni kukuqina kwalo okugqithileyo. Zizinto ezinokuthenjwa ezinokuma kakuhle kumaqhuqhuva kunye nokuqaqamba.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, umthi yinto eguqukayo kwaye eguqukayo, oko kuthetha ukuba inokwenziwa ngokwezifiso kuyo nayiphi na uyilo oluthandayo ukulunga isitayile sendlu yakho iphela. Inokulungiswa kwakhona nakweyiphi na ubungakanani kwaye inokunyangwa ngeendlela ezahlukeneyo ezinjengepeyinti, ivanishi, ibala lomthi kunye ne-polyurethane.
Iingcango zegaraji ezenziwe ngomthi zikwanokusebenza ngamandla kakhulu. Inkuni sisigqubuthelo esingcono kunesinyithi.
yintoni ukufumana intombi yakho yesikhumbuzo
Ukungancedi kweengcango zegaraji zokhuni: Nangona yomelele, iingcango zegaraji zokhuni ziyasokola xa zibonakalise ukufuma kakhulu kunye nokufuma. Olu hlobo lwezixhobo alumi kakuhle kwimvula, kwisichotho nakwikhephu. Umthi uthambekele ekulweni, ukwanda kunye nokubola xa uvezwe ukufuma. Ikwayathandeka kwi-bug kunye ne-termite infestation kwaye inokugcina ukukhula komngundo kunye ne-mildew. Nje ukuba ezi ngxaki zikhule, zihlala zibutshintsha ngokugqibeleleyo ubuhle bendalo bomnyango wakho wegaraji yomthi- owona mgangatho uxabisekileyo kakhulu owaziwa ngocango lwegaraji yomthi kwindawo yokuqala.
Elinye icala elisezantsi leengcango zegaraji zokhuni kukuba bafuna ulondolozo oluphezulu. Bayakufuna ukupeyintwa rhoqo, ukugcina kunye nokugqiba rhoqo kwiminyaka embalwa ukugcina ubuhle babo. Kodwa ukuba uhlala kwingingqi enemozulu emanzi, kuya kufuneka uyenze rhoqo le nto. Ukugcinwa kocango lwegaraji lomthi kuguqulela kwiindleko ezongezelelekileyo kwaye kufuna umzamo omkhulu kunye nexesha. Ngamanye amaxesha, iingcango zegaraji zokhuni zinewaranti emfutshane- uninzi luye kuphela kunyaka omnye. Kodwa ungakuqinisekisa oku kumthengisi wakho omthembileyo ngaphambi kokuthenga.
Ukugqitywa kokugqitywa kunye nokugcinwa kuyadingeka ukulungisa ubuthathaka beengcango zegaraji zokhuni. Ukuyigqiba nokunyanga ngokufanelekileyo kuyakukhusela kwizinto kunye nakwizinambuzane. Kunye nokhathalelo olufanelekileyo, le nkqubo yolondolozo inokwandisa kakhulu ubomi bayo.
Ngokwendlela yokuphatha, iingcango zegaraji zokhuni zihlala zinzima, ke xa ufaka, uya kudinga isandla esongezelelweyo.
Isinyithi lolunye ukhetho lwezinto ezidumileyo kwiminyango yegaraji. Zimbini iintlobo eziqhelekileyo zesinyithi ezisetyenziswa kwiingcango zegaraji, ezizezi intsimbi kunye nealuminium. Isinyithi sisinyithi sekhabhoni kunye nentsimbi, esaziwa kakhulu ngamandla aso aphezulu. Sesona sixhobo sikhulu sokwakha esisetyenziswe kuyilo loyilo nakwimizi-mveliso kuba ayibizi kodwa inzima kakhulu.
Xa uthenga umnyango wegaraji yentsimbi, kukho izinto ezimbini eziphambili ekufuneka uziqwalasele, ezizezi ukugquma kunye negeji okanye ubukhulu .Okokuqala, isinyithi ngokwendalo sisambathisi esifanelekileyo, ke kuya kufuneka uthenge iingcango ezinokugquma ukuphucula ukusebenza kwamandla kunye nengxolo iipropathi zokurhoxisa. Uninzi lwexesha, iingcango zegaraji zentsimbi zenziwe ngamanqanaba e-galvanized iron kunye ne-insulation ebekwe phakathi.
Okulandelayo kukulinganisa okanye ubukhulu.Isinyithi siveliswa ngokwamanqanaba ahlukeneyo okanye ubukhulu obuqala ku-0 kuye kuma-38, kodwa kwiminyango yegaraji kwizicelo zokuhlala, iiphaneli ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo ziwela phakathi koluhlu lweegeyiji ezingama-24 ukuya kwezingama-28.(phezulu kwinombolo yokulinganisa, isinyithi esincinci). Iingcango zegaraji zebanga lezorhwebo ziyatyeba.
Iingcango zegaraji ezinezi ndidi zinokuthenjwa ngakumbi kwayendinomngcipheko omncinci ngakumbi wokufaka amazinyo. Iingcango zexabiso eliphantsi zineepaneli ezicekeceke ezinamanani angama-27 ukuya kwangama-28. Nangona zomelele, ezi zinto zibhityileyo azimanga kakuhle ukuba nefuthe. Iingcango zegaraji zentsimbi ephakathi, kwelinye icala, zinomlinganiso wama-25 ukuya kuma-26, ngelixa iingcango zegaraji zentsimbi ezisemgangathweni ophezulu ubuncinci zine24 gauge. Abanye abavelisi bakwavelisa iingcango zegaraji zentsimbi ngombala we-fiberglass ukuze kulungiswe ubuthathaka bentsimbi enje ngeoksijini, irusi kunye nokufaka amazinyo.
Eyona minyango yegaraji ibalaseleyo yenziwa ngamanqanaba amabini e-galvanized iron ene-insulation phakathi. Umphezulu uphathwa ngesiqhelo, ugqunywe ngepeyinti okanye unikwe idyasi ephezulu enzima. Unokuthenga iingcango zegaraji zentsimbi ezinxibe izinto ezidityanisiweyo, nangona kunjalo, olu khetho luya kukuxabisa ngakumbi.
Izinto eziluncedo ngeengcango zegaraji zensimbi: Isinyithi lukhetho olubhetele kakhulu kunenkuni ukuba ufuna umnyango wegaraji ongadingi kulondolozwa okuphezulu. Ngokungafaniyo neenkuni ezihlala zibolile xa zithotyelwe ukufuma, iingcango zegaraji zentsimbi ziyakwazi ukumelana nezinto ezitshintshayo ezinje ngokufuma kunye nobushushu. Iingcango zegaraji zentsimbi azibhijeli okanye zibole kwaye kunqabile ukuba zifune ukulungiswa kwakhona.
Ukuzinza okugqithisileyo yenye yeempawu eziphezulu zomnyango wegaraji yentsimbi. Ayidubi ngokulula kwaye ayisayi kuphuma kumaqhuma kwisichotho esincinci. Kubonakalisiwe ukuba lume uvavanyo lwexesha kwaye kunokuhlala amashumi eminyaka. Inyaniso,Uninzi lweengcango zentsimbi ezikumgangatho ophezulu kwintengiso ziza newaranti yobomi.
Ngokwendlela yoyilo kunye ne-aesthetics, unokufumana uluhlu olubanzi lwezinto onokukhetha kuzo kwiingcango zegaraji zentsimbi kwimarike. Inokwenziwa ngemibala eyahlukeneyo kwaye inokuba neepaneli, ukufakwa kwefestile kunye nezinye iinkcukacha. Ngaphandle kwemibala emininzi, iingcango zegaraji zentsimbi zinokunyangwa ngokugqitywa kokutya okuziinkozo, okuthetha ukuba usenokubonakala kakuhle ngomthi ngaphandle kweengxaki ezinxulumene nazo.
Kubanini bamakhaya abachaphazelekayo ekusebenzeni kwamandla, iingcango zegaraji zentsimbi zikwakhokelela kwipakethe. Ezi zinto zisebenza ngamandla onke unyaka wonke. Uninzi lweengcango zegaraji zentsimbi ziza nesiseko segwebu esinceda ukugcina umoya wegaraji uqinile, indawo ke ihlala ishushu okanye ipholile. Ekuhambeni kwexesha, oku kuguqulela ukonga kumandla akho kunye namatyala ombane, ngelixa ukhusela nantoni na egcinwe kwigaraji yakho.
Ixabiso elichanekileyo, iingcango zegaraji zentsimbi zikwindlela elungileyo kuba zihlala zingabizi. Ufumana ixabiso elifanelekileyo ngexabiso lalo.
Ngaphezulu kwako konke, iingcango zegaraji zentsimbi zidibanisa ubuhle, ulondolozo olusezantsi kunye nokusebenza kwamandla kwinto enye.
Ukungancedi kweengcango zegaraji zensimbi: Nangona iingcango zegaraji zensimbi zingaboli, ukubola okanye ukubola njengeengcango zomthi, zinokukrwempa okanye zibethwe. Isinyithi esingafakwanga sisekelo okanye esisiseko sinobuthathaka kwi-oxidation kunye ne-corrosion, oko kuthetha ukuba inokuba nomhlwa, ibenze ukhetho olungafanelekanga kumakhaya akufutshane nemimandla eselunxwemeni. Nangona kunjalo, unokuyiphatha ngengubo yokukhusela ukukhusela umhlwa ekwakheni. Imikrwelo nayo iya kufuna ukuchukunyiswa ngokukhawuleza.
Ngokwayo, intsimbi ngokwendalo ayisiyiyo into yokwambathisa elungileyo, yiyo loo nto uninzi lweengcango zegaraji ezenziwe zezi zinto ziza nokongezwa okungaphezulu.
Ukuba ujonga enye indlela engabizi kakhulu emthini, ungajonga ukufumana umnyango wegaraji edityanisiweyo. Iingcango zegaraji ezidityanisiweyo zihlala zenziwe ngesakhelo somthi esigutyungelwe ngamashiti eebhodi zefibre. Iibhodi zefayibha zenziwe ngama-80% e-recycled fibers kunye ne-arhente yokubopha. Isiseko somnyango wegaraji odityanisiweyo sigcwele ukufakwa kwe-polystyrene.
Unokufumana kwakhona iingcango eziphezulu zegaraji kwimarike, kodwa ngexabiso elibiza kakhulu. Olu khetho lwenziwa ngokukodwa ngesikhumba se-fiberboard esixineneyo kwaye lukhangeleka luyinyani, phantse lufana nomthi wokwenyani. Ezinye zineendlela zokuyila ezineenkcukacha ezibandakanya ukugquma kunye nemijelo.
Izinto eziluncedo zeengcango zegaraji ezidibeneyo: Eyona nto intle malunga neminyango yegaraji edibeneyo kukuba banikezela ngento elungileyo kodwa engabizi kakhulu kumthi. Nangona bengenazo inqanaba lobuhle elinalo ucango lwegaraji oluqinileyo, ziyafumaneka kuyilo olusondele njengeyona nto yokwenyani. Yicinge ‘njengomnyango wegaraji yomthi osaphulelo’, thabatha ubuthathaka njengotyekelo lokubola, ukwahlukana, ukubola okanye ukugcwala zintubi.
Iingcango zegaraji ezidibeneyo nazo zihlala zomelele kwaye ziphantsi. Ayifuni kugcinwa okanye ipeyintwe kwaye inokucocwa ngokulula. Ukongeza ekuthembekeni kwabo njengezinto ezibonakalayo, iingcango zegaraji ezidityanisiweyo zikwanombane. Ukufakwa kwe-polystyrene eyandisiweyo kuphucula ukujikeleza komoya kwigaraji yakho, kuthintela umoya opholileyo okanye oshushu ukuba ungaphumi.
Ngokubanzi, iingcango zegaraji ezidityanisiweyo zibonelela ngokuqina kwentsimbi, ngokudibanisa nobuhle beplanga.
Ukungancedi kweengcango zegaraji ezidibeneyo: Nangona kungabizi ngaphezu komthi, iingcango zegaraji ezidityanisiweyo zibiza kakhulu kunezinye izinto. Nangona kunjalo, zama ukungavumeli ixabiso lentengo elibizayo likujike, kuba le nto inokukunceda ugcine iindleko zamandla iminyaka kwaye inokuhlala ubomi bakho bonke.
Olunye ukhetho lweengcango zegaraji yi-fiberglass. Phakathi kwazo zonke izixhobo ezisetyenzisiweyo, i-fiberglass yeyona ndlela ilula. I-fiberglass yenziwe nge-filament yeglasi ephezulu. Iveliswa ngu ukufudumeza iglasi ide inyibilike kwaye inyanzelise kwimingxunya emincinci ethi emva koko idale imitya emincinci. Imisonto yeglasi okanye imisonto ilukiwe yangamashiti amakhulu avumela utshintsho kwiimveliso ezahlukeneyo ezinjengefanitshala, iingcango ezidityanisiweyo, iifestile, njl.
Ngokwesiqhelo, olu hlobo lweengcango zegaraji zenziwa ngeepaneli zeglasi zeglasi ezifakwe kwisakhelo sealuminium. Ungayithenga ipeyintiwe
Izinto eziluncedo ngeminyango yegaraji ye-fiberglass: Ngaphandle kokujongeka kubuthathaka, iingcango zegaraji zeglasi fiber zihlala ixesha elide kwaye zithembekile. Banikezela ngenkcaso enkulu ekubambeni amazinyo. Ukongeza, ayiyikukhula, i-warp okanye ibole xa ifunyenwe kumswakama kunye nomswakama. Zisebenza kakuhle kumakhaya abekwe kwimimandla eselunxwemeni kuba amelana nokubola kwamanzi anetyuwa.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-fiberglass yinto elula kakhulu ukuphathwa kunye nokufakwa kulula ngakumbi xa kuthelekiswa nezinye izinto. Kwaye kuba ayisindi, akukho ngxolo incinci xa uvula okanye uvale umnyango wegaraji.
Izinto ezingalunganga zeengcango zegaraji ye-fiberglass: Enye yezona zinto ziphantsi kakhulu kwiingcango zegaraji ye-fiberglass kukusebenza kwamandla. Le nto ayisiyi-insulator elungileyo kwaye ayisebenzi xa kuziwa ekugcineni umoya kwigaraji lakho ufudumele okanye upholile. Iqondo lobushushu elingaphandle kwekhaya lakho linokungena ngokulula ngaphakathi kwigaraji yakho kwaye linokushiya ungonwabanga. Ekuhambeni kwexesha, oku kungakhokelela ekwandeni kweebhili xa kufikwa kumbane, ukupholisa kunye nokufudumeza.
Nangona iingcango zegaraji ze-fiberglass zingaphuli ngokulula xa ziveliswe ukufuma, kodwa ziyaba krakra xa ziphantsi kobushushu obubandayo, zibenza babe yinto efanelekileyo engafanelekanga kumakhaya akwingingqi ezibandayo. Iingcango zegaraji ze-fiberglass ziyaphela ngokuhamba kwexesha ngenxa yokuvezwa rhoqo kwemozulu eguqukayo.
Iingcango zegaraji ze-fiberglass ziyamelana nomhlwa kunye nokubola, zisebenza ngokufudumeleyo, kwaye zinokwenziwa ukuba zifane nezinto ezahlukeneyo, ngakumbi iinkuni. Amacwecwe e-fiberglass ahlala edityaniswe kwisakhelo sensimbi nge-polyurethane insulation, elungele amakhaya kwimozulu eshushu. Ezi ntlobo zeminyango zomelele. Nangona kunjalo, banokubanombala kwaye baphule kwiindawo ezibandayo.
Iingcango zegaraji ezenziwe nge-fiberglass aziphantsi kokutsala okanye ukuqhekeka. Abangurusi kodwa banokuqhekeka kwimpembelelo. Amacwecwe amabini e-fiberglass ahlala edityaniswe kwisakhelo sentsimbi kwaye azaliswe nge-pFiberglass aya kufuna ukuphindaphindwa okanye ukugcinwa kwakhona, nangona umbala uphela ngokuhamba kwexesha.
Inketho yangoku yeengcango zegaraji ziingcango ezifakwe iiplati zeglasi.Ngokwesiqhelo, iingcango zegaraji ezenziwe ngeglasi zineefreyim zealuminium kwaye ziza kwiindidi ezahlukeneyo ezinjengeglasi enqabileyo, iglasi enombala okanye iglasi ebunjiweyo. Olunye uyilo lukwadibanisa iiphaneli ezingafaniyo kunye neglasi ukwenza ukubonakala kwamehlo ngakumbi. Oku kugqitywa okukhethekileyo kuhlala kudityaniswa ukulungiselela ukungabikho kobucala kunye nokhuseleko. Iglasi efrijiweyo kunye neteyinti kunciphisa ukungafihli kwaye inxenye ibhloka umbono, ngelixa iglasi yokhuseleko lobushushu okanye iipaneli ze-acrylic zinika ukhuseleko ngakumbi.
Iingcango zegaraji ezifakwe kwiglasi zifike ngobukhulu obahlukeneyo kodwa iiphaneli ezisemgangathweni zisusela kwi-1/8, 3/16 kunye ne-1/4 ubukhulu zokwahluka okukodwa okuphathwayo kunye ne-1/2 ubukhulu kwiglasi efakiweyo. Kuba iglasi ngokwayo ikwayi-insulator ehlwempuzekileyo, uninzi lwabavelisi banikezela ngesambatho esikhethekileyo esonyusa ukusebenza ngamandla kweengcango zakho zegaraji, ukugcina ubushushu bendlu yakho bulawulwa.
Izinto eziluncedo ngeglasi eneminyango yegaraji: Ixabiso lobuhle kunye nobuhle zezona mpawu zibalaseleyo zinokubonelelwa ngumnyango wegaraji. Zijongeka njengangoku xa kuthelekiswa nezinye izinto kwaye zidibene kakuhle namakhaya anamhlanje. Iglasi nayo inendlela eyahlukileyo yokwenza indawo ibonakale inkulu kwaye ivuleke ngakumbi, ngakumbi kuba inokuvumela ukukhanya kwendalo kungene. Kananjalo, ukuba ungumntu othanda ukonwabela imbonakalo elungileyo, le nto yeyona nto ilungele ikhaya lakho.
Olu hlobo lwezinto zomnyango wegaraji lukwabonelela ngolona loyilo kunye nolwazelelo loyilo. Unokukhetha uhlobo olubanzi lwezinto onokukhetha kuzo xa kufikwa kwisakhelo sealuminium kunye nohlobo lweglasi oza kusetyenziswa. Ingenziwa ngokwezifiso ukufanisa isitayile sakho sodwa kwaye ikwayindlela efanelekileyo yokuhlaziya ukubonakala kwekhaya lesiko.
Izinto ezingeloncedo ngeglasi eneminyango yegaraji: Eyona nkxalabo inkulu kubanini bamakhaya xa isiza ngeglasi eneminyango yegaraji kukuswela ubumfihlo nokhuseleko. Ngokungafaniyo nezinye izinto ezinjengokhuni, ukudityaniswa okanye isinyithi esigcina igaraji yakho ifihliwe, wonke umntu uyalibona ikhaya lakho nangaliphi na ixesha losuku. Ngaloo ndlela, abaninzi abaninimzi bacinga ukuba akukhuselekanga ukuyisebenzisa njengoko kunokuqhekeka ngokusebenzisa amandla angabonakaliyo.
Iingcango zegaraji ezenziwe ngeglasi ziyasilela xa kufikwa kuzinzo. Nangona iipaneli ezisetyenziselwa olu hlobo lwesicelo zinamandla kwaye zomelele, azinako ukuthelekisa ukuthembeka kunye nokuqina kwentsimbi okanye ukhuni. Iglasi ikwaphuka kwaye iyathandeka ekuqhekekeni kwaye inokonakala kumaqhuma okanye kwisichotho, kwaye inokukrwempa
IVinyl yenziwe nge-polyvinyl chloride (i-PVC) -ikwayinto enye esetyenziselwa ukwenza imibhobho kunye nezinto zokufaka imibhobho yamanzi. Yaphuhliswa njengenye indlela yokusika iindleko kwisinyithi, ngelixa ibonelela ngokuguquguquka kunye nokuqina njengezinto zokwakha.
Iingcango zegaraji zeVinyl zihlala zakhiwe kwizakhelo zentsimbi kwaye zigcwaliswe nge-polyurethane insulation. Ukubonakala kulumkile, bajongeka ngokufana kakhulu kwiminyango yegaraji ye-fiberglass. Nangona kunjalo, beza kuyilo olulinganiselweyo kunye nemibala.
Izibonelelo zeengcango zegaraji zevinyl: Iingcango zegaraji zeVinyl zinokuqina okuzinzileyo kwaye zinokuxhathisa ukufota. Ikwasebenza kakuhle kakhulu nangokuchaphazeleka rhoqo kukutshintsha kobushushu kunye neqondo lobushushu. Ayizukubola, ukubola, irusi okanye idrive xa idibana nokufuma, ityuwa, ikhephu okanye isichotho. Olukhetho olufanelekileyo ekhaya elibekwe kwimimandla eselunxwemeni. Ukongeza ekuthembekeni kubushushu obutshintshayo, iingcango zegaraji zevinyl azipheli nokuba zibonakaliswe kukukhanya kwe-UV.
izipho zokuzalwa zomfazi wakho
Olunye uncedo olukhulu lweengcango zegaraji ze-vinyl kukuba kufuna ulondolozo olusezantsi kakhulu. Umbhobho okhawulezayo phantsi kwamanzi unokucoca ngokulula nakuphi na ukungcola okanye uthuli. Ikwaqwalaselwa njengobungqina bomntwana kwaye isebenza kakuhle kakhulu malunga nokufakwa kwesandi kunye nokucinywa kwengxolo. Ikwanamandla okusebenza kwaye ine-inshurensi efanelekileyo enokukunceda ukulawula ubushushu kwigaraji yakho.
Xa kuziwa kumaxabiso, iingcango zegaraji ze-vinyl zithathwa njengeyona ndlela ifikelelekayo xa kuthelekiswa nezinye izinto. Ibiza kakhulu kunentsimbi, kodwa inezibonelelo ezininzi. Ke, ukuba usebenza ngohlahlo-lwabiwo mali olunomda, kodwa ufuna umnyango wegaraji onokuhlala iminyaka, ungalujonga olu khetho.
Ukungancedi kweengcango zegaraji zevinyl: Owona mqobo mkhulu kwiingcango zegaraji ze-vinyl kukusilela kokuguquguquka koyilo kunye neenketho zokwenza ngokwezifiso. Baza ngemibala encinci kunye noyilo, lubenza ukhetho olunomtsalane xa ufuna umnyango wegaraji osebenza njengendawo ekugxilwe kuyo ekhayeni lakho.
Sijonge ngokufutshane ezinye iipeyinti zangaphandle onokuzifumana kumthengisi wepeyinti okanye kwivenkile yebhokisi enkulu yendawo yakho. Kwaye ekubeni uxhomekeke kwizinto ezinale projekthi, sigxile kwiimpawu ezenza ukuba lo msebenzi wepeyinti ungabi nazintlungu.
Ukupeyinta umnyango wegaraji lesinyithi kubandakanya ixesha kunye nomzamo, kodwa ekugqibeleni yeyona ndlela ilungileyo yokunika ikhaya lakho ukubonakala ngokutsha!
Ipeyinti yendlu yangaphandle ye-Acrylic yeyona nto ikhethekileyo, kodwa qiniseka ukukhetha ipeyinti ekumgangatho ophezulu. Kwiimeko ezininzi ingubo enye yepeyinti yiyo yonke into efunekayo, kodwa gcinani engqondweni kunokuthatha ngaphezulu kwengubo enye ukubonelela ngendawo elungileyo ukuba upeyinta iingcango zegaraji umbala okhanyayo kunombala wokuqala.
IWindows lolunye uphawu onokuthi ulongeze kumnyango wegaraji ukuphucula ukubonakala kwekhaya lakho. Ngokwesiqhelo, iifestile zibandakanyiwe kuyilo ngaphambi kokuba umnyango wegaraji ulungiselelwe okanye ufakwe, nangona kunjalo, unokukhetha ukongeza nasemva kokuba ucango lufakiwe.
Zininzi izinto ekufuneka uziqwalasele ngaphambi kokufaka iifestile kumnyango wegaraji, oko kukuthi; isimbo sendlu yakho, indawo obekwe kuyo okanye isikhundla sakho kunye nomthwalo okanye ubunzima beewindows. Iyonke indlela yoyilo kunye noyilo lwekhaya lakho yinto ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele ekukhetheni iifestile kumnyango wegaraji yakho ukuze uvelise ulungelelwaniso oluhambelanayo nolungeleleneyo. Umzekelo, ukuba ikhaya lakho linomxholo wale mihla kwaye iifestile zi-glazed, iya kucinywa ukubeka ifestile kumnyango wegaraji onendawo yemveli efana noyilo lwe-starburst. Khumbula, umnyango wakho wegaraji kufuneka usoloko uhambelana kwaye uhambelana nalo lonke ikhaya lakho.
Ukubekwa kunye nokuma kwefestile kumnyango wegaraji yenye yeqonga elibalulekileyo ngokulinganayo. Ukubeka iifestile kwipaneli ephezulu kuvumela ukukhanya kwendalo ngakumbi kwigaraji ngaphandle kokuncama ubumfihlo. Olunye ukhetho kukubeka iifestile kwicandelo lesithathu lomnyango wegaraji (ipaneli yesithathu ukusuka ezantsi), kwelinye icala, ikunika umbono wangaphandle kwegaraji yakho. Nokuba ukhetha ntoni, zombini zisebenza kakuhle xa kufikwa kubuhle njengoko zigcina uyilo lungelelene.
Uyilo lomnyango wegaraji yanamhlanje kunye nexesha langoku zihlala zineefestile zeefestile emacaleni kunokuba zibekwe ngokuthe tye ngaphezulu.
Okokugqibela, ukubeka ifestile kumnyango wegaraji yakho kunomdla wokwenza ukungalingani kwinkqubo yasentwasahlobo yomnyango wegaraji. Iinkqubo zentwasahlobo kwiingcango zegaraji zihlala zinokuma umahluko omkhulu we-5% yabo bonke ubunzima bomnyango. Ngomnyango olungeleleneyo, unokusebenzisa kuphela i-8 ukuya kwi-10 leepawundi zobunzima obongezelelweyo okanye kungenjalo isivuli somnyango wegaraji awuyi kusebenza ngokufanelekileyo.
Iifestile zomnyango wegaraji ziza nezinto ezahlukeneyo zoyilo, iimilo kunye nemibala. Ezinye zineefom ezilula zoxande, ezinye zigobile kwaye zinemilo enzima ngakumbi. Abanye baneglasi ecacileyo, abanye banamabala amhlophe okanye imibala.
Uyilo olukhethekileyo olwenziwe ngeglasi yoyilo lolunye ukhetho lweefestile zomnyango wegaraji. Ezi zihlala zenziwe ukuba zifane neefestile zeglasi. Olunye uyilo olongezelelekileyo kukufakwa kweplastiki okuthe gabalala kwicala elingaphandle lesakhelo sefestile, ezinje ngeengqameko, iifestile zaseFrance kunye neendlela ezahlukeneyo. Ngamanye amaxesha, uyilo lunokupeyintwa ukuthelekisa isikimu sombala ongaphandle wendlu.
Kukho iintlobo ngeentlobo zoyilo lwefestile yegaraji onokukhetha kuyo kwaye amagama ayahluka kumthengisi ngamnye. Ezona zixhobo ziqhelekileyo ziyipaneli enye yoxande, i-transom okanye i-fanlight, i-french windows kunye ne-arched ..
Ukugquma yenye into enokongezwa kumnyango wegaraji. Endaweni yokuba bubuhle, oku kungaphezulu kwento esebenzayo ekhulisa ukusebenza kunye nokusebenza kakuhle komnyango wegaraji. Ukufakwa emnyango komnyango wegaraji kuchaphazela umnyango wakho wegaraji ngeendlela ezininzi: (1) yonyusa ukuzinza, (2) inyusa ukusebenza ngokukuko, (3) inciphisa ingxolo kwaye iphucula isithintelo sesandi kwaye (4) ilawula ubushushu.
Ukufakwa emnyango komnyango wegaraji kugcina umoya oshushu nopholileyo kwigaraji yakho. Yenza ikhaya lakho lizole ngokusebenza njengomqobo ngokuchasene nengxolo yesitalato. Ukongeza, iyanceda ukugcina amandla kwaye inokugcina imali ekuhambeni kwexesha. Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukongeza ubushushu kumnyango wegaraji ukuba igaraji iyinxalenye, okanye iqhotyoshelwe kwikhaya lakho. Funda ngakumbi malunga iqhotyoshelwe vs ubuchule kunye neengozi zegaraji Apha.
Ufuna nini ukugquma? Ngokwesiqhelo, iingcango zegaraji zakhiwa ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo: 1-layer, 2-layer, and 3-layer. Ucango olunye lwegaraji yenziwe ngesangqa esinye sentsimbi kwaye ayinako ukugquma. Inkqubo ye- Iingcango ezimbini zegaraji zenziwe ngezinto ezintathu ezahlukeneyo - isambathisa esenziwe phakathi kwesangqa esinye sentsimbi kunye nenkxaso ye-vinyl. Iingcango ezintathu zegaraji ezikumgangatho ophezulu kwaye zenziwe ngamanqanaba amabini esinyithi ngokugquma phakathi. Le yokugqibela yeyona ibiza kakhulu kwaye isebenzayo.
Kukho iindidi ezi-2 zokugquma: iPolystyrene kunye nePolyurethane. IPolystyrene yinto enye esetyenzisiweyo ekwenzeni iimveliso ze-styrofoam. Olu hlobo lokugquma luhlala lusetyenziswa kulwakhiwo lomnyango wegaraji ezimbini. Lyu, kwelinye icala, ivelisa ucango oluqinileyo ngakumbi lwegaraji njengoko igcwalisa ipaneli yonke. Ukufakwa kwe-polyurethane kunokufumaneka kwiingcango ezintathu zegaraji.
Kukho iikiti ze-DIY ezingasetyenziselwa ukongeza ubushushu kumnyango wegaraji esele ikho. Iza kwiindidi ezine ezahlukeneyo ezizezi, iselulosi, igwebu lokutshiza, igwebu eliqinileyo kunye neglasi yeglasi. Kuya kukubiza malunga ne- $ 200 ukufaka isango lakho kwigaraji.
Zininzi iintlobo zeminyango yegaraji ukukhetha kwi. Eyona ethandwa kakhulu ibhanti, iqhosha lemenyu, itsheyini kunye ngqo drive. I-Chain drive mhlawumbi indala kwaye isasetyenziswa kakhulu kumakhaya namhlanje.
Olunye uphuculo onokuthi ulongeze kumnyango wegaraji kukuvula isitshixo esingenaqhosha. Olu hlobo lweyunithi lusebenzisa isitshixo seqhosha ukuvula, ukuvala nokutshixa umnyango wegaraji. Ukungeniswa okungenasitshixo kunika izibonelelo ezininzi njengokuvumela ukufikelela okuninzi usebenzisa ikhowudi kuphela, kunciphisa umngcipheko wokuphulukana nesitshixo (kuba awudingi mntu usebenze umnyango wegaraji) kwaye, nolawulo lwentambo.
Ukuze usebenzise iphedi yamaqhosha, kufuneka usete ikhowudi yofikelelo yokhuseleko. Le khowudi iya kuvula kwaye ivale ucango lwegaraji yakho. Xa ufaka ikhiphedi ekude, awudingi ukuba neengcingo kwigaraji evula ngokwayo kwaye ungayiseta naphi na ngokulula. Olu hlobo lwesango lomnyango wegaraji lubiza malunga ne-30 ukuya kwi-40 yeedola kude kunye ne-30 ukuya kwi-60 yeedola ikhiphedi.
Ngoku ukuba uyazi izitayile eziqhelekileyo, izixhobo kunye noyilo lweengcango zegaraji ezikhoyo kwintengiso, lixesha lokuba wazi ubungakanani obuphakathi onokukhetha kubo. Nazi ezinye zezona zinto zibalulekileyo kubungakanani beminyango yegaraji kunye nobukhulu:
Iigaraji zinokudityaniswa okanye ziqhotyoshelwe ekhayeni lakho. Igaraji eqhotyoshelweyo, njengoko igama lisitsho, iza nendlu yakho, ngelixa igaraji egudileyo sisakhiwo esahlukileyo esikufutshane nekhaya lakho okanye ngaphakathi kwepropathi yakho.
Olona khetho lincinci kwiigaraji iigaraji zemoto enye. Iigaraji zeemoto zenziwe ukuba zilingane isithuthi esinye kwaye zinemilinganiselo esemgangathweni yeIinyawo ezili-12 ububanzi kunye neenyawo ezingama-20 ubunzulu. Obu bungakanani banele ukuba igaraji yakho isetyenziswe njengeshedi okanye igumbi lokulala elincinci okanye umhadi. Unokwakha igaraji enkulu ukuba ufuna ukugcinwa ngakumbi. Olunye ubungakanani begaraji yemoto enye zii-14 iinyawo ububanzi x 22 iinyawo ubunzulu, 16 iinyawo ububanzi x 24 iinyawo ubunzulu kunye neenyawo ezili-14 ububanzi x 24 iinyawo ubunzulu.
Iigaraji ezimbini zeemoto Ngokucacileyo zinkulu njengoko zinokulungiselela izithuthi ezimbini ngaxeshanye. Ewe kunjalo, ukuba awunazimoto zimbini kodwa unendawo entle ekhaya, ungakhangela olu khetho ukuba ufuna ngaphezulu yokugcina igaraji okanye ubenezixhobo ezifana nomatshini wokucoca ingca okanye ombane wekhephu ofuna indawo eyaneleyo yokubekwa.
Indawo eqhelekileyo yegarajiI-ns yegaraji ezimbini zeemoto ziimitha ezili-18 ububanzi ngeenyawo ezingama-20 ubunzulu. Olunye ubungakanani obuqhelekileyo zii-20 iinyawo ububanzi x 20 iinyawo ubunzulu, 22 iinyawo ububanzi x 22 iinyawo ubunzulu kwaye 20 iinyawo ububanzi x 22 iinyawo ubunzulu.
Ngaphandle kwenye okanye ezimbini zegaraji zemoto, kukho enye indlela ebaluleke kakhulu igaraji yemoto ezintathu . Iigaraji ezintathu zeemoto zixhaphakile kumakhaya anabantwana abasele bekwazi ukuqhuba kwaye banezithuthi zabo. Ngamanye amaxesha, indawo eyongezelelweyo ikwasetyenziswa njengegumbi losapho elongezelelweyo. Iigaraji zeemoto ezintathu zihlala zinomgangatho oqhelekileyo weenyawo ezingama-32 ububanzi ngeenyawo ezingama-20. Ngokufana ne-18 x 20 2 iigaraji zeemoto, i-32 x i-20 iinyawo zilungele iimoto ezi-3. Olunye ukhetho olukhulu lubandakanya iinyawo ezingama-36 ububanzi x iinyawo ezingama-25 ubunzulu, ii-38 ububanzi ububanzi x 26 iinyawo ezinzulu kunye neenyawo ezingama-40 ububanzi x 30 iinyawo ubunzulu.
UKUYA igaraji esecaleni iqulunqwe apho enye imoto imiswe ngqo phambi kwenye. Olu hlobo luhlala lusetyenziswa kwiindawo ezixineneyo ezinjengeedolophu ezinkulu apho indawo ikwi-premium. zinokuba luncedo ukuba nazo kodwa zingaphazamisi xa umntu efuna ukusebenzisa imoto emileyo ngasemva.
Iingcango zegaraji zenziwa ngaphakathi ububanzi obuqhelekileyo ukuba ziqala ukusuka kwi-8 yeenyawo ukuya kwi-20 yeenyawo. Iingcango zegaraji zemoto ezizodwa ziqala ngeenyawo ezisi-8 kwaye zize ngeenyawo ezi-1, zineenyawo ezili-10 ububanzi. Iingcango zegaraji zemoto eziphindwe kabini, kwelinye icala, ziqala ngeenyawo ezili-12 kwaye unyuse isayizi yokuphakama kweenyawo ezi-2 ngeenyawo ezili-18 njengobona bukhulu. Unoku-odola iingcango ezinkulu, kodwa ezi modeli zifuna ixesha elininzi lokuhola.
Ukuphakama okusemgangathweni Iingcango zegaraji zilinganiselwe kwaye zihlala zinikezelwa nge-7 okanye i-8 yeenyawo kuphela. Iinqwelo-mafutha ezininzi zihlala zilingana kwintloko ephezulu yeenyawo, nangona kunjalo, ukuba unendawo ephezulu yokulala, isenokunganeli.
Imilinganiselo engezantsi yile imilinganiselo yomnyango wegaraji esemgangathweni esetyenziswa ngabathengisi abakhokelayo kunye nabavelisi:
Ubungakanani beminyango yegaraji yemoto enye-8 x 7 iinyawo, 6 x 7 iinyawo, 7 x 7 iinyawo
Ubukhulu beminyango yegaraji yemoto-i-14 x i-6 iinyawo kunye ne-16 x i-7 iinyawo (inokulingana ngokukhuselekileyo iimoto ezimbini ecaleni)
Inkqubo ye- ubukhulu obuqhelekileyo ukuba uninzi lwabenzi abazisebenzisayo zii-intshi ezi-6, kodwa oku kuxhomekeke kwinto esetyenzisiweyo. Iingcango zegaraji zentsimbi, umzekelo, zinokubhitya njenge-intshi. Iingcango ezifakwe i-insulated ziyatyeba kwaye ziza ne-intshi ukuya kwi-intshi ye-intshi yokugquma igwebu phakathi kwesinyithi.
Iingcango zegaraji zeRV ngokubanzi zibanzi ukusuka kwi-12 ukuya kwi-14 yeenyawo ububanzi kunye ne-12 ukuya kwi-16 yeenyawo ubude. Umnyango omde ngeenyawo ezili-16 uya kuhlala uninzi lwezithuthi zolonwabo endleleni.
Zininzi izinto ezichaphazela ixabiso leengcango zegaraji. Oku kubandakanya uhlobo loyilo, isitayile, izinto ezisetyenzisiweyo kunye nobukhulu bomnyango. Ukongeza, izixhobo, izixhobo ezinje ngeziqengqeleki, iinkqubo zentwasahlobo, imikhondo kunye neziphatho ziya kunyusa ixabiso lomnyango wegaraji. Iimpawu ezizodwa ezinje ngee-smart openers kunye nofakelo nazo zizongezo kwiindleko zizonke zomnyango wegaraji.
Iingcango zegaraji ezilinganayo ziqala malunga ne- $ 200, kuxhomekeke kubukhulu kunye nezinto ezisetyenzisiweyo. Eli xabiso linokunyuka nakanye xa kufakelwe ukufakwa. Iingcango zegaraji ezibini, ngokwendalo zibiza ngaphezulu kuba zinkulu kwaye zisebenzisa izinto ezingaphezulu.
Iingcango ezimbini zegaraji zinexabiso eliphakathi le- $ 4,000. Ixabiso eliphakathi leengcango zegaraji eziphindwe kabini zijikeleza i-600 yeedola, kuxhomekeke kwinto leyo ngaphandle kokufakwa. Iminyango ephezulu yegaraji yesiko yeyona ibiza kakhulu kwaye inokubaleka ukuya kumawaka amawaka eedola
Nazi ezinye zexabiso eliqikelelweyo leminyango yegaraji esekwe kwizinto ezahlukeneyo. La maxabiso alandelayo asekwe kwi-16 x 7 iminyango kwaye ayibandakanyi ukufakwa. Izixhobo ezintsha ezinje ngeIitraki, iiroller, intwasahlobo, neehenjisi zihlala zifakiwe kwixabiso lokuthenga lomnyango wegaraji.
Iminyango yeGaraji yeGaraji- $ 1000 ukuya kuthi ga kwi-10,000 yeedola. Inkuni lolona khetho lubiza kakhulu
Iminyango yeGaraji yentsimbi- $ 250 ukuya kwi-3,500 yeedola
Iminyango yeGaraji yeAluminiyam -$ 1,500 ukuya kwii-2,000 zamawaka.
Iminyango yeGaraji yeFiberglass - iqala kwi- $ 1,200 ukuya kwi- $ 2,200
Iminyango yeGaraji yeVinyl- iqala kwi- $ 600
Iminyango yeGaraji edibeneyo- qala kwi- $ 1,500
Iminyango yeGaraji yeGlasi- qala kwi- $ 1,500. Amaxabiso ayafana neengcango ezidityanisiweyo.
Amacango eGaraji e-Steel-ukusuka kwi- $ 250 ukuya kwi-2,500 yeedola.
Yintoni efakiwe kwiindleko zokufakwa kocango lwegaraji elitsha? Kuwo nawuphi na umsebenzi ogunyazisiweyo, iindleko zokufaka ngumrhumo owuhlawulayo wabasebenzi okanye iinkonzo zobungcali.
Ngaphandle kwemirhumo yabasebenzi kunye neyobungcali, iindleko zokufaka umnyango wegaraji entsha ikwagubungela ukuhlanganisa, ukususa ucango oludala, ukukhupha ucango oludala, ukuphucula nokunyusa ucango olutsha kunye nokufaka izixhobo zekhompyutha kunye nezokuvula. Ixabiso eliphakathi lofakelo lokuba iinkampani zihlawulise iingcango zegaraji zibaleke zijikeleze i-250 yeedola kumnyango wesayizi enye kunye ne- $ 350 ukuya kwi-500 yeedola kwiminyango egaraji ezimbini.
Ukuba ucwangcisa kuphela ukuba ususwe umnyango wegaraji, lindela ukuhlawula malunga ne-75 ukuya kwi-200 yeedola.
Ngokomndilili, inkqubo epheleleyo yegaraji, kubandakanya ucango ngokwalo, izixhobo zekhompyutha kunye nezivuli ezineendleko zokufaka malunga ne- $ 750 ukuya kwi-2,000 yeedola kwimigangatho egaraji enye kunye ne- $ 1,000 ukuya kwi- $ 4,000 okanye nangaphezulu kwiminyango egaraji ephindwe kabini.
Uhlobo ngalunye lomnyango wegaraji lineempawu zalo ezizodwa kunye nezibonelelo ezibenza babe lukhetho olufanelekileyo kumakhaya. Ezinye ziyaziwa ngokuzinza kwazo, ezinye iintlobo ngobuhle bazo, ezinye ngokusebenza kwazo kunye nokuzigcina ziphantsi. Ngalo lonke ukhetho oluthiwe thaca kuthi, inokuba ngumsebenzi onzima ukukhetha ukuba yeyiphi eyona ilungele ikhaya lethu. Ukhetho lwakho lokugqibela luya kuxhomekeka kweloluphi uhlobo lwexabiso oluxabise kakhulu- ubuhle, ukuqina, iindleko okanye ukugcinwa.
Nantsi ingcebiso yethu kwifayile ye- eyona minyango yegaraji ngokusekwe kwiimpawu zabo ezibalaseleyo:
Uhlobo oluphezulu lomnyango wegaraji olusekwe kuzinzo nokhuseleko: Xa kufikwa kumba wokuqina, ukusebenza kunye nokuthembeka, iingcango zegaraji zentsimbi yenze ibe phezulu kuluhlu lwethu. Yenziwe ngezinto ezinzima zomsebenzi, olu hlobo lweengcango zegaraji lunokuhlala amashumi eminyaka kwaye luyakwazi ukumelana nezinto ezininzi zangaphandle. Ikwabonelela ngokhuseleko.
Uhlobo oluphezulu lomnyango wegaraji olusekwe kubuhle: Iingcango zegaraji zomthi isengoyena uphumeleleyo ngokucacileyo xa kufikwa kwixabiso lobugcisa xa lilonke. Umthi, ngokubanzi, unobuhle bendalo obahlukileyo obungenakulinganiswa nayo nayiphi na enye into.
Uhlobo oluphezulu lomnyango wegaraji olusekwe kugcino: Eyona ilula ukuyigcina ngaphandle kwazo zonke iindlela zokukhetha umnyango wegaraji igaraji edityanisiweyo iingcango . Olu hlobo lweengcango zegaraji aludingi kupendwa okanye ukucokiswa, alupheli ngokuhamba kwexesha kwaye lifuna nje ukubetha kancinci kwamanzi ukucoca ubumdaka.
Uhlobo oluphezulu lomnyango wegaraji olusekwe kwiindleko: Owona mnyango wegaraji unexabiso eliphantsi onokuwuthenga kwimarike iingcango zegaraji zentsimbi. Nangona zitshiphu kunezinye, isinyithi sinika ixabiso elifanelekileyo lemali njengoko yomelele kakhulu.
Olunye ukhetho olufanele ukuqwalaselwa: Ukuba kufuneka silinganise izinto ezintle ngokuchasene neempawu ezingalunganga zohlobo ngalunye lomnyango wegaraji, kufuneka sinike ingcebiso ekhethekileyo kwiminyango yegaraji njengoko iimpawu zabo zidibanisa ezona mpawu zibalaseleyo zokukhetha izinto ezahlukeneyo ngelixa sisusa ubuthathaka babo. Kukonke, Iingcango zegaraji ezidibeneyo zinikezela ngokuqina kwentsimbi, ngokudibanisa nobuhle beplanga
Ngaba iingcango zegaraji zingapeyintwa? Impendulo nguewe, iingcango zegaraji zinokupeyintwa. Nangona kunjalo, uhlobo lwepeyinti okanye ukugqiba ekufuneka ulisebenzisile kuya kuxhomekeka kakhulu kwizinto zomnyango wakho.
Ipeyinti, eyona ndawo ifumaneka ngokulula kwaye yomelele inokusetyenziselwa ukhuni, intsimbi, ifayibha kunye neminyango yegaraji ye vinyl. Eyona nto intle malunga nepeyinti kukuba iza ngemibala eyahlukeneyo, ke unokuqiniseka ukuba ufumana i-hue ngqo ukuze utshatise ingaphandle lendlu yakho.
Ipeyinti ye-Acrylic latex luhlobo kuphela lwepeyinti olusebenzela zonke izinto zomnyango wegaraji. Ukuba ufuna ukuvuselela umnyango omdala wegaraji, faka iingubo ezimbini zepeyinti ye-latex kumnyango wakho wegaraji. Ukugcina inkangeleko yomnyango wegaraji, ungasanti kwaye uphinde ufake uhlobo olufanayo lwepeyinti rhoqo kwiminyaka emihlanu.
Ukuba unomnyango wegaraji yomthi, enye indlela onokuyihlola ngayo iingubo ezicacileyo. Iibhotshi ezicacileyo ziyi-varnish engenambala ebonisa iinkozo zendalo zomthi. Ukuhlaziya ucango lwegaraji lomthi elidala, faka iidyasi ezintathu, ngelixa ugcina, sebenzisa umaleko omtsha wengubo ephezulu minyaka le. Olu lukhetho olufanelekileyo ukuba ufuna ubuhle bendalo bomnyango wakho wegaraji ubonakale.
Ungathenga iingcango zegaraji kwiivenkile zokuphucula ikhaya ezinje ngeKhaya iDepho okanye iLowe, kodwa kukwakho abavelisi bendawo kunye neenkampani ezizimeleyo ezinikezele ngokukodwa kwimveliso yeengcango zegaraji.
Ukuba ucwangcisa ukuthenga umnyango wegaraji kumakhaya endawo / kumaziko ophuculo, kuyanceda ukuba uqale ukhangele iwebhusayithi yabo ngaphambi kokuba uye evenkileni. Ngale ndlela, unganciphisa ukhetho lwakho kwaye ugcine ixesha kunye nomzamo xa ujonga iisampulu zokwenyani. Ekuphela kwento oyifunayo yimilinganiselo ngqo yokuvulwa kweengcango zegaraji. Nje ukuba uthathe isigqibo sokuba loluphi ucango oza kulithenga, isifaki siya kuqinisekisa umlinganiso wakho ukuqinisekisa ukuba umnyango uyangena kwigaraji yakho.
Iinkampani zeminyango yegaraji yengingqi zinokuphatha uphawu olunye lomnyango okanye iintlobo ezahlukeneyo zeempawu. Abavelisi abakhulu bavelisa amacandelo eminyango eyenziwe kwangaphambili anokuqwalaselwa, emva koko iinkampani zalapha ziphathe ufakelo.
Ezinye iinkampani zeminyango yegaraji zinamagumbi azo okubonisa, kodwa unokujonga iwebhusayithi yazo ukuze ufumane isishwankathelo semigca yazo yemveliso kwaye uthelekise amanqaku emodeli nganye. Xa ukhangela abathengisi beminyango yegaraji, ikwanceda kakhulu ukuba ungafumana uqikelelo okanye ifom yokucaphula ubuncinci iimveliso ezintathu ezahlukeneyo ukuze wenze uthelekiso olungileyo kwaye ufumane esona sivumelwano.
Abanye babavelisi beminyango ephezulu kunye neyona mikhulu ilandelayo zezi zilandelayo:
Clopay - IClopay yaziwa kakhulu ngokwenza iingcango zegaraji, iingcango zokungena kunye neengcango zorhwebo ezingaphezulu. Iimveliso zabo zibiza malunga ne- $ 400 ukuya kwi- $ 4000 kuxhomekeke kwisitayile kunye nobungakanani.
Ngubani u-colin jost otshatileyo
UWayne-Dalton - Oyena mvelisi mkhulu weengcango ezingaphezulu, uWayne noDalton yinkampani esekwe eOhio ebonelela, ifaka kwaye ilungise iingcango zokuhlala nezorhwebo.
URaynor - URaynor ulawula ukwakhiwa, ukufakelwa, ukutshintshwa kweengcango zegaraji, abasebenza ngomnyango wegaraji, kunye nokufakwa komnyango wegaraji kwizicelo zokuhlala nezorhwebo
Ndiyabulela Iminyango engaphezulu - Ndiyabulela Iminyango engaphezulu ngumenzi owaziwayo ekumgangatho ophezulu wokuhlala, icandelo lokuthengisa kunye neengcango zentsimbi ezijikelezileyo.
Ndwendwela eli phepha ngaphezulu Izimvo zokwenza igaraji .
Ungalitshintsha njani igama lakho e-oregon emva komtshato
indlela yokubopha isaphetha seribhoni
Efese 5: 22-33
Ungasusa njani amaqhuma ezele kwi-vag
iziqithi zasekhitshini ezinkulu